कसरी एक एफएम ट्रांसमिटर सर्किट कभर 3KM-5KM बनाउने? - CZH / Fmuser एफएम ट्रांसमीटर चीन आपूर्तिकर्ता सम्पर्क: lanyue whatsapp: +86 13602420401 स्काइपी: lanyue99991
घर » समाचार » कसरी एक एफएम ट्रांसमिटर सर्किट कभर 3KM-5KM बनाउने?
कसरी एक एफएम ट्रांसमिटर सर्किट कभर 3KM-5KM बनाउने?
मिति: २०१-2017-०05-२० / वर्ग: समाचार
FMUSER FM ट्रान्समिटरहरू संचारका लागि विश्वभरि प्रयोग भएको छ। एफएम सर्किटको निर्माणको सरलताले यसलाई अन्य मोडुलन प्रविधिहरूमा यति लोकप्रिय बनायो। आज म एफएम ट्रान्समिटर सर्किटको साथ आएको छु जुन करीव K किलोमिटरको दायरा छ। सर्किट रेखाचित्र एकदम फराकिलो थियो र म यो वेबपृष्ठमा फिट गर्न सक्दिन। ठूलो रिजोलुसन छवि हेर्नका लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यस सर्किटको काम गर्ने भागमा प्रवेश गरौं।
FMUSER एफएम ट्रान्समिटरका लागि कसरी काम गर्ने:
यस सर्किटमा धेरै कम्पोनेन्ट्स र पार्ट्सहरू थिए त्यसैले म विवरण सम्भव भएसम्म सरल राख्नेछु। यो एक राम्रो क्वालिटी एफएम ट्रान्समिटर हो स्थिर स्थिरता द्वारा परिमार्जित थरथरता द्वारा ल्याइएको, जुन वास्तवमै दुई ओसिलेटरहरू हुन् Q2 र Q3 वरपर निर्मित anti० मेगाहर्ट्जमा एन्टि-फेजमा काम गर्दछ। आउटपुट दुई कलेक्टरहरूमा लिइएको हो, जहाँ दुई थरथरिकाहरूका फ्रिक्वेन्सीहरू १०० मेगाहर्ट्ज सिग्नलको रूपमा गठन गर्दछन्। यो सामान्य एकल समाप्त oscillators भन्दा एक ठूलो स्थिरता प्रदान गर्दछ।
यो मोडुलन डुअल भेरिक्याप D1 / D2 र भेरिएबल संधारित्र C8 मार्फत गरिन्छ। भेरिक्यापमा रिभर्स बायस भोल्टेज परिवर्तन गरेर (एक इनपुट संकेतको अनुसार) तपाईले उनीहरूको क्यापेसिटान्स अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ यसरी ट्या circuit्की सर्किटको अनुनाद आवृत्ति। यसले वस्तुतः इनपुट स of्केतको फ्रिक्वेन्सी मोड्यूलेसन गर्दछ। ओसिलेटर / मोड्यूलेटर चरणको आउटपुट ट्रान्सिस्टर क्यू using प्रयोग गरेर बनाइएको ड्राइभर स्टेजलाई क्लासमा खुवाइन्छ। Q4 वरिपरि निर्मित वर्ग सी पावर एम्प्लीफायरमा फीड गरेर आउटपुट संकेत थप मजबुत हुन्छ।
अब कक्षा C बाट क्याप्यासिटरहरू र इन्ड्याक्टर्सको श्रृंखलाको कम पास फिल्टरहरूमा आउटपुट संकेत फिड गर्नुहोस्। यो एन्टेनालाई खुवाउनु अघि आउटपुटमा न्यूनतम हर्मोनिक्स स्पर्स हासिल गर्न गरिन्छ। मैले एउटा सator्केतक LED D3 थपेको छ जसले तपाईं प्रसारण गर्दैछ र सबै कुरा ठीकठाक छ भनेर देखाउँदछ। यदि एलईडी प्रकाश छैन भने योजनाबद्ध केहि गलत छ। समस्या सामान्यतया थोलिटर भागमा देखा पर्दछ (केवल एक स for्केतको लागि)। र मैले लगभग सबै भेरिएबल क्यापेसिटरहरू हटाउनको लागि पनि व्यवस्था गरें तर ट्युनिंगको लागि एउटा, किनकि मूल योजनाबद्धसँग धेरै धेरै चर समाधारणीयहरू थिए र ती सबैलाई ट्वीक गर्न गाह्रो छ।
एफएम सर्कितको आवरण श्रेणी:
यस एफएम सर्किटमा आउटपुट संकेतको शक्ति २. 2.5W हो। २.W डब्ल्यू एफएम संकेतमा राम्रो दृश्यको साथ K - K किलोमिटर दूरी कभर गर्न सक्षम छ। र सबै भन्दा राम्रो मामला मा यो लगभग 2.5km पुग्न सक्छ। त्यसैले म विश्वास गर्दछु कि यो सर्किटले K किलोमिटर दायरा कवर गर्दछ अर्ध इष्टतम वा सबैभन्दा खराब बाह्य परिस्थितिमा पनि कभर गर्दछ।
यो सर्किट यूरोपियन एफएम रिसीभर प्रणालीहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो यद्यपि यसले अमेरिकामा पनि काम गर्ने छ, मलाई अडियो निश्चित छैन कि अडियो गुण उस्तै रहन्छ। यो तथ्यले आयो कि मैले us०us प्रीमफिसिस प्रयोग गरें जुन युरोपेली मानक हो र अमेरिकाले us 50us प्रीमफिसिसको साथ काम गर्दछ।
यो सर्किट बनाउँदा, त्यहाँ केहि पीसीबी विचारहरू छन् जुन तपाईले पालना गर्नु पर्छ। प्रणाली तारिiring गर्दा ग्राउंड रेलको सट्टा भुईं हवाई प्रयोग गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले जमिन क्षेत्र र स्थिरता बढाउँछ। तपाईं एन्टेना फिड लाइनको ठीक अगाडि एक बलुन पनि निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ २१ इन्च लम्बाई भएको कोएक्सियल केबलको or वा turns पाटीहरू कोक्सिंग गरेर। नतिजाको रूपमा यसले केबलको बाहिरी शेलमा बग्ने बिजुली क्षेत्रहरूको लागि गुंजयय जाल सिर्जना गर्दछ, र यसलाई एन्टेनाको अंशमा रोक्न रोक्छ, जुन अवांछनीय हो।
लोड बिना ट्रान्समिटर कहिले पनि सुरू नगर्नुहोस्।
यदि तपाईंले एन्टेना जडान गर्नुभएको छैन भने 50० ओएचएमको एक डमी लोड रेसिस्टर केवल २ डब्ल्यू (कार्बनमा, तार घाउमा होइन) राख्नुहोस् र तपाईंको सर्किट परीक्षण गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि तपाइँ सबैलाई यो प्रोजेक्ट मनपर्नेछ, यो प्रयास गर्नुहोस् र तपाइँको नतीजा पोष्ट गर्नुहोस्। क्वेरीहरूको लागि कृपया तलको टिप्पणी बाकसको प्रयोग गर्नुहोस्, म यसको उत्तर दिन खुशी हुनेछु। खुशी DIY बनाउने
यदि तपाईं एक किन्न चाहनुहुन्छ भने एफएम ट्रान्समिटर र एक रेडियो स्टेशन निर्माण, मलाई सम्पर्क गर्नका लागि स्वागत छ। हाम्रो ईन्जिनियरले एक समाधान प्रस्ताव गर्नेछ।
«अघिल्लो: तपाइँको प्रत्यक्ष स्ट्रिम IPTV प्रसारण को लागी एन्कोडर कसरी सेट गर्ने?
२०१ Six प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि छह लोकप्रिय अनलाइन भिडियो प्लेटफार्म: यूएसट्रीम, डाकास्ट, लाइभस्ट्रीम, कलतुरा, ओयोला, र ब्राइटकोभ : अर्को »